Eminyakeni engama-25 elandelayo, Ukubikezela Kwami | Martech Zone
Eminyakeni engama-25 elandelayo, Ukubikezela Kwami
NgoLwesine, Novemba 16, 2006 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 12, i-2014 Douglas Karr
Kumnandi ukucabanga ngekusasa nokuthi yini engaletha. Nalu ukuqoqwa kokubikezela kwami…
Abaqaphi bekhompyutha bazoba nezimo, babe lula, babanzi futhi bangabizi. Kakhulu eyenziwe ngamapulasitiki, izinqubo zokukhiqiza zizoshibha futhi zishibhe.
Ukuhlangana kocingo, ithelevishini, nekhompyutha kuzophela kakhulu.
Izimoto nezindiza kusazosebenza uphethiloli.
Amandla we-United State asazonikelwa ikakhulu ngamalahle.
Isoftware yekhompyutha izobe ingasekho, kufakwe iSoftware njengesevisi. Amakhompyutha azomane abe neziphequluli nezinhlelo zokusebenza ezincane ezinikwe amandla i-inthanethi ezinamadatha amakhulu.
Okungenantambo kuzotholakala yonke indawo, ngezixazululo ezihlanganisiwe… ukuthenga ngocingo olungenantambo, ukubuka umcimbi wezemidlalo ngentambo engenantambo, njll.
Idizayini yohlelo lokusebenza izoshintsha kusuka ekuhlelweni kuye kuzinhlelo zokusebenza ezikhiqizwa ngumsebenzisi kusetshenziswa izixhumi ezibonakalayo zomsebenzisi.
I-GPS izoba kuyo yonke indawo, futhi kuzosetshenziswa amasistimu olwazi lwendawo ukusilandela, izingane zethu, izingcingo zethu, izimoto zethu, njll.
Imishini yasendlini izobe isilungile nge-Intanethi, nezilawuli zohlelo lokusebenza ezilula zitholakala ngewebhu.
Amasistimu e-alamu namakhamera kuzoba yonke i-inthanethi elungele futhi engenazintambo, evumela amakhasimende nabasebenzi bezimo eziphuthumayo ukuthi baxhume futhi baqinisekise izingqinamba.
Izinhlelo zokubonwa kobunikazi zizodlula ngale kwezigxivizo zeminwe, ubuso, nezinhlamvu zamehlo - futhi empeleni kuzosebenzisa ukunyakaza ukwenza amaphrofayili nemeshi.
Amakhompyutha ngeke abe nezingxenye ezisuswayo zememori (awekho ama-drive ajikelezayo, amadiski, ama-CD, noma ama-DVD)
Abaculi nomculo wabo bazonikwa izinkontileka yizinkampani, ezihlobene nomculo nemikhiqizo. Umculo uzosatshalaliswa mahhala.
Izinsiza zokuhumusha zomuntu siqu nabahumushi bedijithali besikhathi sangempela bazotholakalela imihlangano noma izingqungquthela zamavidiyo, okwenza ulimi nolimi lwesifunda kungabi ndaba zalutho.
Imali izobe ingekho empilweni yethu yansuku zonke, kunalokho sizosebenzisa imali ye-elekthronikhi.
Kuzotholakala amadivayisi okuhlinza asebenzisa izicubu ngaphandle kokuwathinta ngokomzimba.
Ohulumeni abacindezelayo bazoqhubeka nokuwa ngenxa ye-Intanethi kanye Nezomnotho Emhlabeni Wonke.
Igebe phakathi kwengcebo nobumpofu lizokwehla kepha indlala nokungondleki kuzokwanda.
Izinkolo zizohluleka kakhulu futhi zibe yizinhlelo ezisekela umphakathi ezisekela ngokomoya.
I-Intanethi izophenduka izendlalelo ezahlukahlukene, ezentengiselwano, ezizimele, eziphephile, njll.
Amagama Esizinda azobe engabalulekile kakhulu njengoba ukuseshwa kokuqashelwa kolimi nokubonwa kokuqukethwe kuya ngokugqama. Iningi labantu ngeke lisebenzise dot com's asisekho.
Abathuthukisi bazophendukela kubahlanganisi abazophendukela kumaLogician njengoba izilimi zamakhompiyutha ziba ngokufihlekile kakhulu futhi izixazululo zokudala zisebenzisa amathuluzi amaningi kubaluleke kakhulu.
Amabhodi wesekethe azoba yinto engandile - izinhlelo zokufaka amandla aphansi ezinamasekethe ahlanganisiwe ziyovame kakhulu. Ayikho i-solder, azikho izintambo, akukho ukushisa… okufana neLegos.
Ukwenza imephu yemicabango ngamandla kagesi nangamakhemikhali kuzokwenza ukuthi kungene kwezokwelapha. Ukuphathwa kwalawo makhemikhali namandla kagesi kuzolandela. Amaphilisi ngeke ajwayelekile njengoba yonke imithi izoba nezindlela zokuphuzwa endaweni ngaphandle kobuhlungu, umjovo, noma ukugaya.
Imithi izokwelapha ukukhuluphala.
Ngabe ubucabanga ukuthi bengizothi Ukuthula Komhlaba? Cha.
Tags: Ngokuzayoukubikezela ikusasaUkubikezelaizibikezelo zobuchwepheshe
Yonke Imikhiqizo ingxoxo
Nov 17, 2006 ngo-12: 21 AM
Oooh… dlala ama-MP3 ocingweni! Ngikhohliwe ukuthi isimanga kanjani leso esingasungulwa [ukubhuqa].
Nov 17, 2006 ngo-12: 07 AM
Ukungondleki? Ubumpofu? Ikuphi i-Apple iPhone?
Dec 27, 2008 ku-8: 26 AM
Ngizohlala ku- # 25 kuphela.